USES Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha ISTICMAALKA Warshad
Xaashida loo yaqaan 'DHUA' ee loo yaqaan 'acrylic sheet', xaashiyaha polycarbonate waa ku dhowaad in aan la jabin karin, iyaga oo siinaya iyaga faa iido gaar ah oo ay ka helaan muraayadda xagga nabadgelyada iyo amniga. Xaashida muraayadda ah ee loo yaqaan 'polycybon acylic' iyo 'polycarbonate sheet' waxaa laga samayn karaa dhowr muraayadood oo ammaan ah & muraayadaha amniga, muraayadda barta indha la 'iyo muraayadaha kormeerka. Xaashida acrylic cad ayaa laga samayn karaa alaabada ilaaliyaha hindhisada.
Codsiga ugu muhiimsan waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
• Muraayadaha badbaadada ee bannaanka & muraayadda amniga
• Muraayadda Wadada & muraayadaha taraafikada
• Muraayadaha badbaadada ee qulqulka gudaha
• Muraayadaha badbaadada ilmaha
• Muraayadaha qubbada
• Baadhista iyo arag-muraayadaha (muraayadaha laba-geesoodka ah)
• Sneeze Guard, gaashaanka badbaadada Isbaarooyinka Difaaca
Awood iyo adkeysi, xaashida loo yaqaan 'DHUA's acrylic sheet iyo muraayadaha muraayadaha ayaa loo adeegsadaa codsiyada gaadiidka, muraayadaha gaadiidka iyo muraayadaha baabuurta.
• Muraayadaha Convex
• Muraayadaha muuqaalka gadaal, muraayadaha sideview
Qalabka inta badan loo isticmaalo codsiyada iftiiminta waa acrylic iyo polycarbonate. Alaabtayada acrylic-ka waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo muraayado nadiif ah ama lagu faafiyo guryaha la deggan yahay, naqshadaha iyo codsiyada nalalka ganacsiga. Waxaad ka dooran kartaa alaabadayada acrylic-ka si aad ula kulanto shuruudaha farsamo iyo muuqaal ee mashruucaaga.
• Guddi hagitaan iftiin ah (LGP)
• Calaamadaha gudaha
• Nalalka guryaha
• Iftiinka ganacsiga
Acrylic waa galaas beddel ah oo caan ku noqday shey abuur ah. Way adag tahay, jilicsan tahay, khafiif tahay, iyo xitaa dib loo cusboonaysiin karo. Looxyada looxa loo yaqaan 'Acrylic-panel' waa kuwo aad u kala jaad ah oo ku habboon xaalad kasta oo nololeed maxaa yeelay aad bay u ammaan badan yihiin uguna cimri dheer yihiin. Waxay xafidi doonaan sawirrada iyo looxyada aad uga dheer muraayadda. waxay qaban karaan wax kasta oo laga soo bilaabo sawirada illaa farshaxanada caato ah iyo xusuusta.
• Qurxinta gidaarka
Waxqabadka balaastigga ah iyo wax soo saarka balaastigga ah ayaa ku qarxay goobta dhacdooyinka. Caaggu wuxuu bixiyaa xal fudud oo waara oo lagu heli karo midabbo, dhumucyo, iyo qaabab kala duwan. Shirkadaha dhacdooyinka waxay jecel yihiin akrilik maxaa yeelay waxay la jaan qaadi karaan mawduucyo qurxin badan oo kala duwan waana mid waara oo kufilan inay wali u muuqato mid qurux badan dhacdooyin dhowr ah
Waxyaabaha xaashida kuleylka ah ee DHUA ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa bandhigyada iyo waababka ganacsiga.
• Soo bandhig kiisaska
• Kaarka ganacsiga / buug-yare / calaamadeeye heyste
• Looxyada dhejiska ah
Thermoplasticsku waa shey dhexdhexaad u ah muujinta iyo ikhtiraaca. Xulashadayada tayo sare leh, xaashi acrylic badan leh iyo alaabada muraayadda balaastigga ah waxay ka caawineysaa naqshadeeyayaasha inay u keenaan himilooyinkooda hal abuurka ah nolosha. Waxaan bixinnaa midabyo kala duwan, dhumuc, qaabab, xajmiga xaashiyaha iyo qaabeynta polymer si loo buuxiyo baahiyaha farshaxan la'aanta iyo codsiyada naqshadeynta.
• Qurxinta Darbiga
Iyada oo iska caabinta kuleylka sare, xoogga saameynta sare leh, ka hortagga ceeryaanta iyo heerka sare ee muuqaalka madadaalada, xaashiyaha polycarbonate ee DHUA ayaa ah xulashada ugu habboon ee difaaca ilkaha gaashaanka iyo muraayadaha ilkaha.
• Muraayadda ilkaha / Afka
• Difaaca wajiga ilkaha
DHUA waxay bixisaa noocyo kala duwan oo balaastig ah oo si qurux badan u raali galinaya, sida akrilik, polycarbonate, polystyrene iyo PETG, si kor loogu qaado soo bandhigida wax soo saarka. Qalabkan balaastigga ah ayaa ku habboon bandhigyada barta-iibsiga (POP) si looga caawiyo kordhinta iibka oo loo beddelo daalacayaasha caadiga ah bixinta macaamiisha sababtoo ah fudeydkooda been abuurka, guryaha bilicsanaanta wanaagsan, miisaanka fudud iyo qiimaha, iyo adkeysiga oo kordhay waxay xaqiijineysaa nolol dheer oo POP ah bandhigyada iyo keydinta waxyaabaha la ciyaaro.
• Soo Bandhigid
Miisaan ka fudud kana adkaysi badan calaamadaha birta ama alwaaxda, calaamadaha balaastigga ah waxay u adkeysan karaan xaaladaha bannaanka oo leh yaraansho, dildilaac, ama hoos u dhac yar. Iyo balaastikada ayaa lagu shubi karaa ama lagu farsameyn karaa tilmaamaha saxda ah ee looga baahan yahay muujinta ama calaamadda waxaana lagu soo saari karaa noocyo badan oo midabbo caado ah. Dhua waxay soo bandhigtaa qalabka xaashida balaastikada loo yaqaan 'acrylic sheet' oo loogu talagalay calaamadaha waxayna siisaa been abuur khaas ah.
• Calaamadaha warqadda kanaalka
• Calaamadaha korantada
• Calaamadaha LED-ka
• Looxyada cuntada
• Calaamadaha Neon
• Calaamadaha banaanka
• Calaamadaha kuleylka leh
• Calaamadaha baaritaanka Jidka